BEE: Ku Dhis oo Kala Soo Deg Emailkaaga Taleefonka ah ee Ka Jawaabta Khadka Tooska ah | Martech Zone
Isniin, Maarso 8, 2021 Arbacada, February 9, 2022 Douglas Karr
In ka badan 60% dhammaan emayllada waxaa lagu furaa aaladda moobaylka sida laga soo xigtay Xiriir joogto ah. Waa wax laga naxo in shirkadaha qaar wali la halgamaan dhisida emayllada jawaabta leh. Waxaa jira caqabado 3 leh emaylka jawaabta leh:
Adeeg Bixiye Email - Qaar badan oo ka mid ah bixiyeyaasha emaylka ayaan wali haysan jiidis iyo hoos u dhigid awooda dhisida emaylka, sidaa darteed waxay u baahan tahay tan horumarin ah oo ka timaadda hay'addaada ama kooxda horumarinta gudaha si loo dhiso qaab-dhismeedkaas.
Macaamiisha Emailka - Dhammaan macaamiisha emailku isku mid ma aha oo badankood waxay bixiyaan emayllo ka duwan kuwa kale. Natiija ahaan, tijaabinta macaamiisha emaylka iyo aaladaha waa warshad iyada lafteeda ah.
Horumarinta - Haddii aad taqaanid HTML iyo CSS, waxaad dhisi kartaa bog quruxsan oo jawaabcelin macaan leh si fudud… laakiin u dhisidda marka laga reebo macmiil kasta oo email ah runti waxay noqon kartaa riyo qarow. Waxay u baahan tahay la shaqeynta horumariyeyaal waaweyn, ama la shaqeynta qaab-dhismeedyo heer sare ah oo la tijaabiyay.
Hadda waxaa jira meelo badan oo khadka tooska ah ah oo aad ka heli karto oo aad kala soo bixi karto arrimo email oo bilaash ah oo si buuxda wax uga qabta. Haddii aad ku fiican tahay horumarka, waxaad caadi ahaan kala beddeli kartaa curiyaha oo aad naftaada u dhisi kartaa emayl quruxsan. Tifatirka koodhka ceyriinka ee ka dambeeya emaylka wali maahan wax xiiso leh, in kastoo… iska iloobo qaab ama fasal e-maylkaaguna wuxuu umuuqanayaa mid laga naxo.
Waxaan doonayay inaan ku habeeyo warsidaha Martech Zone in mudo ah hada waxaan runti leenahay adeeg e-mayl u gaar ah oo ku shaqeynaya adeegeena kaas oo ku kacaya dinaar doollar marka loo eego bixiyeyaasha kale. In kabadan 30,000 oo macaamiil ah, kaliya ma cadeyn karo kharashka inta badan bixiyeyaasha adeegga iimaylka si aan annaga u gaar u dhignay!
BEE Dhise Email Jawaab Leh
Markii aan dib u eegay qaar ka mid ah tusaalooyinka hareeraha webka ee aan jeclahay, waxaan ka dhacay guud ahaan BEE, shirkad soo saartay dhowr aaladood oo cajiib ah:
BEE koronto - tifaftire bogga tifaftiraha gabi ahaanba la duudduubi karo ee shirkadaha SaaS si loogu daro barnaamijyadooda.
BEE Pro - shaqeynta naqshadeynta emaylka ee naqshadeeyayaasha email-ka xirfadleyda ah si ay ula shaqeeyaan oo ay u horumariyaan.
Noqo Bilaash -wax dhisaya emayl lacag la’aan ah oo jawaab-celin ah oo aad ku horumarin karto sheybaarrada laga soo bilaabo ama aad soo dejin karto mid ka mid ah boqolaal ka mid ah sheybaarada emaylka ee lacag la'aanta ah.
Eeg E -mailka BEE ee Dhisaha Bogga Dhulka
Saacad gudahood, waxaan awooday inaan dhiso emaylkeyga, oo aan ugu hagaajiyo aaladaha mobilada, naftayda u soo diro imtixaan, oo aan u soo dejiyo koodhka… dhammaantood bilaash!
Marka hore, waxaan soo xulay shaashad maran ka dibna waxaan dhistay qeybihii aan doonayay waxaana ka faa'iideystay sawirrada meesha lagu hayo. Tan ayaan ku calaamadeyn doonaa Martech Zone'template' mar waa sida saxda ah meesha aan doonayo.
Ka dib waxaan horay u eegay emaylka kombuyuutarka oo wax yar ayaan ka beddelay kala dheereynta iyo suufka.
Waxaan ku sii eegay Mobaylka oo waxaan sameeyay xoogaa isbeddello ah. Tifatiraha wuxuu ku siinayaa fursad uu ku qariyo waxyaabaha ku jira desktop-ka ama moobiilka, sidaa darteed waxaad runtii u habeyn kartaa khibradda moobiilka si wanaagsan.
Kadib waxaan si toos ah ugu diray emailka tooska Tifaftiraha BEE:
Tifatiraha ayaa sidoo kale awood kuu siinaya inaad yeelato asal hufan oo umuuqda haddii aad isticmaaleyso Xaaladda madow ee emaylkaaga macmiil.
Markii wax waliba hagaagaan, waxaan awood u yeeshay inaan soo dejiyo faylka HTML oo buuxa iyo wixii sawirro bulsheed ah oo ay ku jiraan isdhexgalka. Waxay leeyihiin waxoogaa fursado ah waqtigan, in kastoo, haddii aad iska qorto koontada lacagta lagu siiyay ee 'BEE Pro'.
BEE fiiri wargeyska la cusbooneysiiyay Martech Zone!
Ku billow Dhisida E-maylkaaga Jawaabta leh BEE
Tags: tifaftiraha emailka shinnidabeebka pluginshinni protifaftiraha emailkatifaftiraha iimaylka bilaashka ahtifaftiraha iimaylka internetkatifaftiraha iimaylka jawaabta leh